Mavhidhiyo - Izwi Rezwi • Kufunga Nekupedzisira uye HW Percival
Kufunga Nekupedzisira, by Harold W. Percival, rakaziviswa nevakawanda sebhuku rakakwana zvikuru rati rambonyorwa pamusoro poMunhu noMuchadenga. Mukudhindwa kweanopfuura makore makumi manomwe, inoburitsa Chiedza chakajeka pamibvunzo yakadzama yakambovhiringa vanhu. Yedu Vhidhiyo peji inosanganisira odhiyo mharidzo yemapeji matatu ekutanga eiyo ziviso uye kuona, uchishandisa mazwi aPercival pachake, munzira isina kujairika Kufunga Nekupedzisira yakanyorwa.
Harold Percival akatsanangura chiitiko chake chakanaka, chine ruzivo rwekuziva Conscious muzvinyorwa kumukuru wake opus, Kufunga Nekupedzisira. Iyi vhidhiyo rondedzero kubva kune iwo mapeji. Iyi ndiyo yega chiitiko apo munhu wekutanga "ini" anoshandiswa. Izvo hazvionekwe kumwe kunhu mu Kufunga Nekupedzisira. Percival akataura kuti aida kuti bhuku racho rive rakanakira uye risingafudzi nehupenyu hwake.
Vhidhiyo iri pazasi inosanganisira odhiyo yakazara ziviso—chitsauko chose chokutanga—kusvika Kufunga Nekupedzisira naHarold W. Percival. Kuverenga uku kunobva kuchinyorwa chechi11.
Mudzidzi we Kufunga Nekupedzisira, Joe, anogovera mifungo yake pamusoro pebhuku racho uye kuti rakatapura sei upenyu hwake.